Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia - Fianarana injeniera in Japana
Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia
fanafohezan-teny : Tit
Aza adino ny midinika Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia
Misoratra anarana ao amin'ny Sekoly Momba ny Teknolojia Tokyo
Tokyo Tech no ambony anjerimanontolo-pirenena ho an'ny siansa sy ny teknolojia any Japana amin'ny tantara naharitra kokoa noho ny 130 taona. Ao amin 'ny eo ho eo 10,000 mpianatra tao amin'ny Ookayama, Suzukakedai, ary Tamachi campus, antsasaky no eo amin'ny mari-pahaizana licence fandaharana raha ny antsasany kosa dia eo amin'ny tompony sy ny mari-pahaizana doctorat fandaharana. Mpianatra iraisam-pirenena maro 1,200. Misy 1,200 sampam-pianarana ary 600 -panjakana sy ara-teknika mpiasa.
Tamin'ny taonjato faha-21, ny anjara asan'ny siansa sy ny teknolojia anjerimanontolo efa lasa mainka zava-dehibe. Tokyo Tech manohy ny hanana mpitondra eran-tany an-tsaha ny siansa sy ny teknolojia, ary manampy amin'ny fanatsarana ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny ny fikarohana, mifantoka amin'ny vahaolana amin'ny olana maneran-tany. Ny Institute maharitra ny tanjona dia ny ho tonga amin'izao tontolo izao ny mpitarika siansa sy ny teknolojia amin'ny oniversite.
Amin'ny maha iray amin'ireo oniversite ambony Japana, Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia mitady handray anjara amin'ny sivilizasiona, ny fiadanana sy ny fanambinana eto amin'izao tontolo izao, ary mikendry fampandrosoana maneran-olombelona fahaiza-manao ny asan'ny mpisava lalana feh tsara amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fanabeazana eo amin'ny siansa sy ny teknolojia, anisan'izany ny indostria sy ara-tsosialy ny fitantanana. Mba hanatrarana izany iraka, manana maso eo amin'ny fanabeazana ara-moraly tena mpianatra mba hahazoana tsy fahaizana ara-tsiansa fa fahaizana amin'ny liberaly-kanto, ary voalanjalanja ny fahalalana ny siansa sosialy sy ny humanities, rehetra raha fikarohana lalina amin'ny fototra mba hampihatra amin'ny akademika fehezina. Amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana ireo, isika maniry handray anjara amin'ny Global maharitra ny zavaboary sy ny fanohanana ny aina.
Sekolin'ny Bioscience sy Biotechnology
Graduate School of Science sy Engineering
Graduate School of Bioscience sy Biotechnology
Interdisciplinary Graduate School of Science sy Engineering
Graduate School ny Fampahalalam-baovao sy ny Science Engineering
Graduate School ny fanapahan-kevitra Siansa sy ny Teknolojia
Tany am-piandohan'ny fe-potoana Meiji, ela taorian'ny fanokafana ny firenena, tonga filaza mandidin 'ny olona hamboly Japana loharanon-karena mba hanana orinasa teknolojia maoderina. Ny governemanta dia mavitrika fampiroboroboana ny fanabeazana ara-teknika ny ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao mba hampitombo ny mandroso siansa sy ny teknolojia izay efa fahita any Eoropa sy Etazonia. Manohitra izany fototra, Japana sekoly teknika-pirenena voalohany, ny Kogakuryo Technical Sekoly, dia naorin'i ny Minisitry ny Engineering in 1873.
Manodidina izany fotoana izany, ny Ministeran'ny Fanabeazana nanangana ny Seisakugaku Kyojo in 1874 amin'ny soso-kevitra ny Gottfried Wagener, Alemaina-teraka mpahay siansa. Wagener efa peo mikasika ny ilana ny fampianarana azo ampiharina ara-teknika tany Japon, mba hanana ambony injeniera sy ny injeniera. Na dia ny Seisakugaku Kyojo nakatona telo taona tatỳ aoriana, dia revolisionera sekoly amin'izany mpianatra nampianarina azo ampiharina fahaiza-manao miaraka amin'ireo teoria siantifika mba hamokarana injeniera ilaina ho an'ny modernizing Japoney orinasa.
Seiichi Tejima, izay avy eo mpanampy tale jeneralin'ny ny Museum Fampianarana, niaraka tamin'ny Wagener nanosika ny maoderina ara-teknika sy ny orinasa amin'ny fanamafisana ny fanabeazana amin'ny fampiharana azo ampiharina. Miaraka amin'ny fanohanan'ny Ryuichi Kuki sy Arata Hamao ny Ministeran'ny Fanabeazana, dia nahomby tamin'ny nandreseny lahatra ny Fanompoana mba hanorina ny Tokyo Sekoly fiofanana arak'asa in May 1881.
Ny fiomanana ho fanokafana ny sekoly nanomboka. Ny fandaharam-pianarana dia naorina teo an araka ny Fitsipika sy ny fitsipika ao amin'ny Tokyo Sekoly fiofanana arak'asa navoaka tao 1881. Ireo fitsipika nilaza fa ny sekoly dia tokony hanome ny ilaina ara-teknika sy ny orinasa siansa fanabeazana ho lasa mpampianatra sekoly arak'asa na zokiny injeniera. Kuramae in Taito City akaikin'ny Reniranon'i Sumida dia voafidy ho toy ny toerana ho an'ny toeram-pianarana. Kuramae dia midika hoe nytrano firaketana anoloan'ny ary ny anarany dia avy amin'ny vary trano fitehirizana ny Tokugawa Shogunate hita any.
Taizo Masaki no voalohany zokiny amin'ny sekoly sy ny kilasy voalohany natao tany 1882 in roa sampan-draharaha: ny Sampan-draharahan'ny ny milina sy ny Departemantan'ny Applied Simia. Ny Sekoly fiofanana arak'asa Tokyo diplaoma ny kilasy voalohany tamin'ny volana Jolay 1887. Tamin'ny voalohany ny sekoly ho sarotra taminy ny mpilatsaka mpianatra, fahaiza-manao ara-teknika ireo satria nentim-paharazana nanolotra an Japana ao amin'ny rafitra fiofanako. Ny fiovana amin'ny fiofanako ho maoderina ny fanabeazana ara-teknika fotsiny ihany no efa nanomboka. In 1884, Wagener nanomboka nampianatra tao amin'ny sekoly araka ny fitsipika sy ny fomba teo aloha Seisakugaku Kyojo. Dia lasa ny teknolojia maoderina ho an'ny famokarana goavana amin'ny orinasa mpamokatra entana orinasa toy ny bakoly, fitaratra, ary lacquerware. Wagener nanome ny fototra ho an'ny Tokyo tatỳ aoriana Tech ny fandrosoana toy ny orinasa fanamboarana namaka tao Japana.
In 1890, Seiichi Tejima naka ny Masaki ny asa ka tonga zokiny amin'ny sekoly. Tejima efa lasa ho any Etazonia hianatra tamin'izy 21 taona ary ny mpandika teny ny Iwakura Mission, ny Japoney iraka izay nandeha diplaomatika manerana izao tontolo izao. Nihevitra izy tatỳ aoriana ny andraikitry ny mpanampy tale jeneralin'ny ny Museum ny Fanabeazana sy nandeha tany amin'ny Paris sy Philadelphia World famelabelaran-kevitra. Avy amin'ireo tantara ireo Tejima Lasa mpisava lalana mpiaro ny ara-teknika fampianarana any Japana. Ny Tokyo Sekoly fiofanana arak'asa dia anarana Tokyo Technical School in 1890 ary avy eo ambony Technical Tokyo Sekoly in 1901. Maro ireo mpitarika ao amin'ny akademia sy ny orinasa nandeha namaky ny varavarana nandritra ny 25 taona izay Tejima nitondra ny sekoly.
Ny fomba fiteny nitsangana nandritra ny taona maro ny Tokyo Technical Sekoly. “Na aiza na aiza misy fivoahan-tsetroka, any no mahita olona avy any Kuramae,” izay midika fa na aiza na aiza nisy goavana indostrialy sarotra, nahazo diplaoma tamin'ny sekoly efa nandray anjara amin'ny fananganana. Kuramae sisa ny foibe ara-teknika fampianarana mandra-sekoly nodorana tamin'ny tany tamin'ny Septambra 1, 1923 raha ny Great horohorontany namely Kanto.
Ianao ve mila midinika Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia ao amin'ny Map
Photos: Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia ofisialy Facebook
Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia.